Gcina Ucolile kwaye Uyenze Ukubika Ngokukodwa
Iingozi kunye neentlekele - zonke izinto ezivela kwinqwelo kunye nokuqeqesha izitshatsheli , iinyikalanga kunye nama-tsunami - ngamanye amabali anzima kunayo yonke. Abathathi bamapolisa kwindawo kufuneka baqoke ulwazi phantsi kweemeko ezinzima kakhulu, kwaye bavelise amabali kwixesha elide kakhulu . Ukugubungela isiganeko esinjalo kufuna yonke uqeqesho lwangomthubi kunye namava.
Kodwa ukuba uhlala ukhumbule izifundo ozifundileyo kunye nezakhono ozifumeneyo, ukufaka ingozi okanye inhlekelele ingaba ithuba lokuzivanya ngokwenene njengentatheli, kwaye wenze enye yemisebenzi yakho engcono.
Nantsi ke iingcebiso ezili-10 zokugcina engqondweni.
1. Gcina Ipholile
Iintlekele ziimeko ezixinzelelekileyo. Emva koko, inhlekelele ithetha into embi eyenzekayo kwizinga elikhulu kakhulu. Uninzi lwabantu abasendaweni, ikakhulukazi amaxhoba, baya kuphazamiseka. Ingumsebenzi wongxelo kwiimeko ezinjalo ukugcina intloko epholileyo, ecacileyo.
2. Funda ngokukhawuleza
Iimpapasho ezihlasele iintlekele kufuneka zifake kwiinkcukacha ezininzi ngokukhawuleza. Ngokomzekelo, usenokungazi ezininzi malunga neeplani, kodwa ukuba unokukhawuleza ubizwa ukuba uncede ukugubungela ukuphazamiseka kwendiza , kuya kufuneka ufunde ngokusemandleni akho - ngokukhawuleza.
3. Thatha amanqaku anqamlekileyo
Thatha amanqaku acacisiweyo malunga nento enokuyifunayo, kuquka izinto ezibonakala zingabalulekanga. Awukwazi ukuba nini iinkcukacha ezincinci zingabalulekanga kwibali lakho.
4. Fumana ezininzi zeenkcazelo
Abafundi bafuna ukwazi ukuba yintoni imeko yentlekele ibonakala ngathi, yavakala ngathi, yavakala ngathi. Fumana izinto, izandi kunye nokuvumba kumanqaku akho.
Cinga nje ngekhamera, urekhode yonke into ebonwayo.
5. Fumana amaGosa ahlawulisiweyo
Emva kwentlekele kuza kubakho abaninzi abaphendula ngokukhawuleza kwimeko - abacima umlilo, amapolisa, ii-EMTs, njalo njalo. Fumana umntu ophethe impendulo yempango. Igosa liya kuba nomboniso omkhulu wezinto ezenzekayo kwaye iya kuba ngumthombo obalulekileyo.
6. Fumana iAkhawunti zokuzibonela
Ulwazi oluvela kumagosa angxamisekileyo lukhulu, kodwa kufuneka ufumane iingcaphuno ezivela kubantu abone oko kwenzeka. Iingxelo zokuzibonela zixabisekileyo kwibali leentlekele.
7. Abaphuli-ndlebe abaPhezulu - Ukuba kunokwenzeka
Akusoloko kunokwenzeka ukuthetha udliwano-ndlebe nabasindayo kwintlekele emva kweso siganeko. Ngokuqhelekileyo baphathwa nge-EMTs okanye baxoxwa ngabaphandi. Kodwa ukuba ngaba basindileyo bazama ukuzama ukuxoxa nabo.
Kodwa khumbula, abantu abasindayo baye basinda kwimeko ephazamisayo. Yiba neengqiqo kwaye unomdla ngemibandela yakho kunye nendlela oqhelekileyo. Yaye ukuba bathi bafuni ukuthetha, bahlonele zabo iimfuno.
8. Fumana iHighes
Phantse yonke inhlekelele kukho amaqhawe avela - abantu abanokuzibhokoxa kunye nokuzithengela ukuphepha kwabo ukuze bancede abanye. Udliwano-ndlebe nabo.
9. Fumana iNani
Amabali amaxesha amaninzi athile malunga namanani - bangaphi abantu ababuleweyo okanye abalimelekileyo, ubuninzi bepropati etshabalalisiweyo, ukukhawuleza kwendiza ehamba ngayo, njl. Khumbula ukuqokelela eli bali lakho, kodwa kuphela kwimithombo ethembekileyo - amagosa aphetheyo umcimbi.
10. Khumbula i-Five W kunye ne-H
Njengoko wenza ingxelo yakho, khumbula into ebalulekileyo kuyo nayiphi na ibali leendaba - ngubani, yintoni, phi, nini, nini, kutheni kwaye njani .
Ukugcina ezo zinto kucinga kuya kunceda ukuqinisekisa ukuba uqokelela yonke inkcazelo oyifunayo ibali lakho.
Funda ngokubhala amabali entlekele apha.
Buyela ekugqibeleni iintlobo ezahlukeneyo zezeMpilo
Oko Kufuneka Ukwazi NgoMarko Twain weHuckleberry Finn
Iimfuneko zexesha elide kwi-Essay Application Common in 2018
Abraham Lincoln - Mongameli we-16 we-United States
Inkoliso: Iyintoni iFable?
Iimvumi eziphambili zamaComment of the 80s